जब मानिसहरूले "मोडेल" शब्द सुन्नु, निश्चित रूपमा तिनीहरूमध्ये अधिकांशले पतला, लामो-टाढाको दासीको कल्पना गर्छन्। यद्यपि, भर्खरैको प्रवृत्तिबाट स्पष्ट रूपमा, मोडेल उद्योगमा यस्तो ज्ञान लामो छ अप्रचलित र अप्रासंगिक। भर्खरैका समयमा, सफल शीर्ष मोडेल निर्माण गर्न, यो सबै चीजलाई सीमित गर्न आवश्यक छैन। आखिर, आज 90-60-90 को पुरानो परिमितिहरु लाई फैशन उद्योग को लागी एक पारित नहीं हो। यसबाहेक, "प्लस आकार" मोडहरू लोकप्रियतामा भइरहेको छ। प्राय: फैशन पोडियम र चमकदार म्यागजिनको आवरणमा त्यहाँ त्यस्ता केटीहरू छन् जुन उनीहरूको शरीर र उनीहरूका उत्कृष्ट आकारबाट शर्मिला छैनन्। यी एक केटीहरू गैर-मानक मापदण्डहरूसँग फ्लाविया लेसेराडाको मोडेल हो।
Flafia Lacerda को जीवनी एक साधारण ब्राजीली केटी को सफलता को कहानी हो जो आदम्य स्टेरियोपाइप्स को नष्ट गर्न को हिम्मत र आज न केवल डिजाइनर कपडे, बल्कि फैशनेबल अंडरवियर पनि प्रदर्शित गर्दछ। यसको अतिरिक्त, केटी सफलतापूर्वक व्यापारमा हटाइयो, र उत्तम मोडेल अनुबंध समाप्ति गर्दछ।
फ्लाविया लेसेराडाको उचाइ 177 सेन्टिमिटर हुन्छ, 80 किलोग्रामको वजन। धेरैले यसलाई "गिसले बन्डनको बढ्दो संस्करण" को रूपमा उल्लेख गर्दछ। यसको अतिरिक्त, केटी लगातार ब्राजीलियन ब्रान्डहरु संग काम गर्दै छन् जो पूर्ण को लागी कपडे को पेशकश गर्दछ। साथै केहि र युरोपेली ब्रान्डहरूसँग काम गर्न फ्वाइसिया भाग्यशाली थियो। केटीले परिसरको पूर्ण कमी देखाउँछ।5बर्ष भन्दा बढीका लागि यसको गैर-मानक मापदण्डहरू संग, फ्लाविया लेसेराडा "प्लस साइज" मोडेलमा सफल क्यारियर बनाउँदैछ।
Flavia Lacerda अहिले धेरै फैशन घरहरूसँग काम गर्दै छन्, र उनी महिलाको अंडरवियरको गैर-मानक साइज विज्ञापनमा एकदम स्पष्ट चित्रकलामा भाग लिन्छन्।
नयाँ वर्ष 2015 - के गर्ने
स्टाइलिश महिलाको लुगा
फैशन प्रवृत्ति - गर्मी 2016
ब्याग्स कार्लो पासोलिनी 2014
महिलाहरु को लागि बुना हुआ टोपी 2014
फैशन कपडे 2014
फैशन 2015 मा नयाँ प्रवृति
बिजनेस स्टाइल 2014
लङ्ग अफ फेरी कपडे 2015
महिलाको Raincoats पतन 2013
नाशपाता लाडा - विभिन्न प्रकारका विशेषताहरू, राम्रो फसलको रहस्य
2014 को शरद ऋतुमा के हुनेछ?
मूत्राशयको संक्रमण - लक्षण
सुन्दर हस्तलेखनमा लेख्न कसरी सिक्नु हुन्छ?
लिली एल्ड्रिजले विक्टोरियाको गोप्यबाट काल्पनिक ब्रा लगाउनेछ
मनोविज्ञानमा रंगहरूको अर्थ
गोदाम र यसको आवेदनमा गोल्डेन मूंछ्या - ट्रेनेचर
घर मा नाखून को उपचार
गर्भावस्थाको आठौं हप्ता - संकेतहरू, सनसनीहरू र सम्भावित जोखिमहरू
घर का बना केभस - नुस्खा
5 बर्षका बच्चाहरुका लागि प्रतियोगिता
आफ्नो हातले कुकुर बूथ
पुरुषहरूको लागि मौलिक उपहारहरू
मनोविज्ञान र दर्शन मा धारणा को परिमार्जन
Miley साइरस लिम हेम्सवर्थ देखि सगाई रिंग को रुचि छैन